सचिव डा पोखरेललाई प्रश्नः स्वास्थ्य सेवाका सचिवले नतिजामुखी काम गरेनन् भन्ने आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
सचिव डा पोखरेललाई प्रश्नः स्वास्थ्य सेवाका सचिवले नतिजामुखी काम गरेनन् भन्ने आरोपलाई कसरी चिर्नुहुन्छ?
रिता लम्साल सोमबार, असोज ४, २०७८, ०७:२९:००
काठमाडौं– तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरी र सरकारबीचको टकरावले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको विवाद लामो समयसम्म चल्यो। सरकारले प्रशासन र प्राविधिक गरी २ थरिका सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य तर्फका सचिव नियुक्त नै गरिएन। प्रशासन तर्फ पनि सचिव फेरबदल भइरहे। जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका काम तथा योजनाहरुमा असर पर्दै गयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य तर्फको सचिव पायो। साउन ४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा डा रोशन पोखरेल नियुक्त भए।
प्रशासन तर्फका सचिवहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाका सचिवले नतिजामुखी काम गरेनन् भन्ने आरोप लगाउन थाले। यी सबै आरोपलाई चिर्न आफूले काम गरिरहेको सचिव डा पोखरेलले बताए। उनले स्वास्थ्य प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले स्वास्थ्य सेवा तर्फकै सचिव हुनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिए।
'स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको ठूलो संस्था हो। ३०/३२ हजार कर्मचारी छौं। करारको समेत हिसाव गर्ने हो भने करिब ३८ हजार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी छौं। यती धेरै कर्मचारी र संरचना भएको मन्त्रालयमा यही सेवाको सचिव हुनुपर्छ भन्ने धेरै पहिले देखिकै माग हो,’ स्वास्थ्यखबरसँगको भिडियो वार्ताका क्रममा सचिव डा पोखरेलले, ‘सरकारले मलाई जिम्मेवारी दिएपछि स्वास्थ्य सेवामा लागेका सबैलाई उत्सवजस्तो भयो। किनकी झण्डै साढे २ वर्ष पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाकै सचिव पाएको हुनाले सबैजना खुशी भएका छन्। सरकारले जिम्मेवारी दिएसँगै मैले पनि यसलाई अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएको छु।’
उनले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा खोप कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकता रहेको पनि बताए।
डा रोशन पोखरेलले तिहार अगाडि सम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पाइसक्ने जानकारी दिए।
उनले शुक्रबार मात्र ४५ लाख खोप नेपाल आएकाले असोजको ५ गतेसम्ममा सबै प्रदेशमा पठाउने र असोज १४ गतेसम्ममा पहिलो चरणमा लगाउने योजना समेत रहेको जानकारी दिए।
सरकारले यसअघि घोषणा गरेअनुसार चैतसम्ममा खोप लगाउन मिल्ने उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप प्रदान गर्न आफूहरु लागिरहेको भन्दै सरकारको घोषणा पुरा हुने सचिव डा पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै अन्य ननकोभिड सेवा तथा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जानकारी दिए।
कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोप अभियान तथा अन्य ननकोभिड सेवा लगायतका स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कसरी अघि बढीरहेको छ? हामीले सचिव डा पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ सचिव डा पोखरेलसँग स्वास्थ्यखबरका लागि रिता लम्सालले गरेको भिडियो कुराकानी: